Nhau - Mhando dzakasiyana dzeSilika Jira
Mhando dzakasiyana dzeSilika Jira
Kana iwe uri mudiwa wemachira epamusoro, iwe unenge uchikurukura nesirika, yakasimba yakasikwa fiber iyo inotaura yakasarudzika uye yekirasi. Kwemakore, zvigadzirwa zvesilika zvakashandiswa nevapfumi kuratidza kirasi.
Kune mhando dzakasiyana dzesilika zvigadzirwa zvakakwana kune akasiyana mashandisiro. Mamwe acho anosanganisira sirika charmeuse, inozivikanwawo sesiriki satin. Mucheka uyu wakanakira kusona machira kunge madhirezi anoyerera, mabhurauzi akasununguka, zvipfeko zvemukati, zvitsvuku, uye kimono nesiriki charmeuse. Iyo haina kureruka uye yakapfava uye ine inopenya kurudyi.
Imwe mhando yesirika zvinhu zvinowanikwa zvekushandisa ndeye chiffon; silika iyi haina huremu uye semi-yakajeka. Iyo yakakwana kune ribhoni, zvitsvuku, uye mabhurauzi uye inopa inoyevedza uye inoyerera chitarisiko.
Inotevera ndiGeorgette; jira iri rinoshandiswa pakuroora kwevakaroora uye madhirezi emanheru; inogona kusonwa mumhando dzakasiyana dzekupfeka senge kupisa, mutsetse, kana kuputira rokwe. Pakupedzisira, kutambanudza ndeimwe jira resilika rinoshandiswa kugadzira majaketi, masiketi, uye madhirezi. Iyo zvakare isingaremi uye ine yakanaka drape.
Mhando yepamusoro yejira yekusarudza kana uchigadzira sirika pillowcasesiri 100% yakachena mulberry sirika charmeuse. Mucheka uyu wakapfava uye unopenya; ine zvivakwa zvinounza zvinonyaradza uye kurara kwakanaka kwehusiku.
Yezve silika pajamas, iwe unofanirwa kusarudza iyo Crepe satin, iyo iri kufema zvakanyanya uye yakasununguka. Iyo yenguva mama inowanzo kuve 12mm, 16mm, 19mm, uye 22mm. Saka 30mm ndiyo sarudzo yakanaka.
Kune masiki emeso esiki, akanakisa acho ndeye mulberry silika. Ine nzvimbo inotsvedza. Inobvisa kushushikana, inodzoreredza mhasuru, inogadzira nzvimbo yakanaka yekurara, inobvisa kupindira, uye inobatsira kuvhara mwenje mwenje pameso.
Post nguva: Sep-08-2021